Otu esi etinye Foxit PDF Reader na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Monday, October 4, 2021 by Jọshụa James
Na ngwụcha nkuzi a, ị ga-ama ka esi etinye Foxit PDF Reader na Debian 11 Bullseye.
Ekele, ị tinyela Foxit PDF Reader na Debian 11 Bullseye.
N'ime nkuzi a, ị budatala ma tinye Foxit PDF reader. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ihe nlele Debian PDF nke ndabara. Foxit nwere ndekọ ndekọ dị mma nke ndozi ahụhụ, ndozi na nchekwa na kwesịrị ekwesị ịchọ onye ọ bụla na-emekọ ihe na faịlụ PDF.
Otu esi etinye Foxit PDF Reader na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye ngwa VM mepere emepe na Debian 10/11
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Foxit Reader Reader Mail igodo